Ukuhlanganiswa Kwesangoma – The Ulwazi Programme
Uma umuntu eba isangoma impilo yakhe ayibe isalawulwa uyena ngoba usuke esuke esengenwe abantu abadala noma amadlozi sekuyibona abasuke asebelawula impilo yakhe. Kuyenzeka umuntu aye ekuthwaseni enomuntu aphilisana naye, kungaba owesifazane noma owesilisa oshadile, onesoka, intombi noma ingoduso. Labobantu uma sebephothulile kuyadingeka bahlanganiswe ngoba kuthiwa idlozi liba nesikhwele uma kungenziwanga lokho.
Kunomcimbi owenziwayo ukuhlanganisa laba bobabili ukuze bangabi nezinkinga ekuthandaneni kwabo. Uma kuhlanganiswa owesifazane oshadile kuthengwa imbuzi bese ehlanganiswa ngayo nomyeni wakhe. Laba bobabili baya koguqa emsamo kanye nesangoma esamthwasisayo ngoba yisona esikhuluma empephweni sihlanganise labobantu.
Uma sesikhuluma siye sithi, Ngiyakhuleka emakhosini akwasibanibani nakasibanibani, njengoba dlozi nazi ukuthi usibanibani senimnike umsebenzi wenu angeke esakwazi ukuzenzela umathanda ngaphandle kwenu, njengoba nazi ukuthi unomyeni ayemshiyile ngesikhathi esekwethwaseni ngakhoke njengoba esebuyile kufanele abe nomyeni wakhe, amnakekele futhi amenzele konke akade emenzele kona ningakamthumi. Ngalembuzi sithi imindeni ayihlangane ukuze laba bobabili bahlale kahle kungabi khona ukungezwani phakathi kwabo kanye nasedlozini. Bobabili labo abahlanganiswayo bazobe sebethelwa ngenyongo okuwuphawu lokuhlangana kwezinyanya. Leyombuzi iyaphekwa idliwe iwona wonke umuntu. Ayibe isabakhona inkinga yize kusuke kungeke kusafana nakuqala ngoba omunye wabo useyisangoma.
Uma bengashadile umcimbi wenzelwa kubo kwentombazane uma kuyiyona eyisangoma, uma kungowesilisa oyisangoma kuba ikubo kowesilisa kodwa kubalulekile ukuthi bawenze lomcimbi ukuze izidalwa zabo zihlangane. Isangoma asizilawuli kodwa silawulwa idlozi futhi singanywa yilona noma ngabe sikuphi futhi sihamba kuphi.